Podcast 2x09 ee Actualidad iPad: Apple TV cusub, Betas iyo inbadan | Wararka IPhone
Qeybtan toddobaadkan waxaan uga hadalnay Betas-ka Apple TV-ga cusub. Qalabka Apple ee aaladaha casriga ah ayaa hada soo gaadhay Apple Stores dadka isticmaalana waxay ku helayaan dib u eegis wanaagsan. In kasta oo wali dukaamanka App-ka ay aad u yaryihiin iyo qaar ka mid ah noocyada ugu horreeya ee tvOS, Apple TV-ga cusubi wuxuu isu muujiyaa qalab ka rajo badan. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay waxyaabaha cusub ee iOS, OS X iyo tvOS betas, WhatsApp iyo cusbooneysiinta Tweetbot, iyo waxa aan la imaan karno. Miyaad seegaysaa?.
Dhegeyso »2 × 09: TV-ga cusub ee Apple, Betas iyo More» oo ku saabsan Spreaker.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 2 × 09 Podcast ee Actualidad iPad: Apple TV cusub, Betas iyo inbadan
8 Ball Pool, ciyaar barkad fudud oo la qabatimo
Tani waa sababta Siri loogu talagalay Apple TV ay ku kooban tahay siddeed dal